Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Uche Chineke -> Chineke
Chineke: [Uche Chineke]
1 TIMỌTI 2:3-4
 Nke a bụkwa ihe dị mma na ihe na-atọ Chineke onye nzọpụta anyị ezi ụtọ. Nꞌihi na Chineke chọrọ ka a zọpụta mmadụ nile, ka ha matakwa eziokwu ahụ.
 Ugbu a ka Chineke ahụ na-enye udo, Chineke ahụ sitere nꞌọbara ọgbụgba ndụ ebighị ebi ahụ kpọghachite Onyenwe anyị Jisọs Onye ọzụzụ atụrụ ukwuu ahụ ndụ site nꞌọnwụ nye unu ihe ọma nile unu chọrọ, nke ga-enyere unu aka ime uche ya. Ka Chineke mejupụta nꞌime unu ihe ndị ahụ nile na-atọ ya ụtọ site na Jisọs Kraịst. Ka otuto dịrị Kraịst ruo mgbe nile ebighị ebi. Amin.
Jisọs gwakwara ha sị, “Ọ bụrụ na unu achọọ isoro m, unu kwesịrị ịgụ ndụ unu dị ka ihe furu efu, buru obe unu ụbọchị nile na-eso m.
Ọ bụ uche Chineke ka unu site nꞌihe ọma unu na-eme na ndụ unu kpuchie ọnụ ndị nzuzu, na okwu na-abaghị nꞌihe ha na-ekwu megide ozi ọma ahụ ha na-amaghị ihe ọ pụrụ imere ha, na ike dị nꞌime ya.
 Ya mere, kpachapụnụ anya otu unu si ebi ndụ unu. Unu ebila ndụ dị ka ndị nzuzu, kama bienụ ndụ dị ka ndị maara ihe. Jirinụ oge nile unu nwere rụọ ọrụ ọma, nꞌihi na ụbọchị ndị a dị njọ. Unu emela dị ka ndị na-enweghị uche, kama gbalịanụ ịchọpụta ihe Chineke chọrọ ka unu mee, meekwa ya. Unu aṅụbigala mmanya oke nke ga-emerụ unu. Kama jupụtanụ na Mmụọ Nsọ. Gosinụ ọṅụ unu site nꞌisoro ndị enyi unu ịbụ abụ ọma, na abụ nile dị iche iche e ji eto Onyenwe anyị. Bụọnụ abụ mgbe nile na-eto Onyenwe anyị nꞌobi unu. Na-enyenụ Chineke Nna ekele ụbọchị nile nꞌihi ihe nile nꞌaha Onyenwe anyị Jisọs Kraịst.